मेरा सन्तान हो, मेरा वचनहरूलाई ध्यान देओ, चुपचाप मेरो आवाजलाई सुन अनि म तँलाई प्रकाशहरू दिनेछु। मभित्र शान्त बन्, किनभने म तेरा परमेश्‍वर हुँ, तिमीहरूका एक मात्र उद्धारकर्ता। तिमीहरूले सँधै आफ्‍नो हृदयलाई शान्त गर्नुपर्दछ र मभित्र जिउनुपर्छ; म तेरो चट्टान, तिमीहरूका सहायक हुँ। अरू कुनै विचार नगर्, तर तेरो सारा हृदयले ममा भरोसा गर् अनि म अवश्य नै तिमीहरूकहाँ देखा पर्नेछु—म तिमीहरूका परमेश्‍वर हुँ! अनि, ती शङ्कालुहरू! तिनीहरू दह्रिलो गरी खडा हुन अवश्य नै सक्दैनन् र तिनीहरूले केही पनि प्राप्त गर्नेछैनन्। अहिले कुन समय हो भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा हुनैपर्छ, यो कति महत्त्वपूर्ण क्षण हो! यो कति महत्त्वपूर्ण छ! बेकारका कुराहरूमा आफैलाई व्यस्त नबनाओ; तुरुन्तै मेरो नजिक आओ, मसँग सङ्गति गर, अनि म तिमीहरूलाई मेरा सारा रहस्यहरू प्रकट गर्नेछु।
तिमीहरूले पवित्र आत्माको अगुवाइको हरेक वचनलाई सुन्‍नुपर्छ र हरेक वचनलाई हृदयमा राख्‍नुपर्छ। धेरै पटक तिमीहरूले मेरा वचनहरू सुनेका छौ अनि तिनलाई बिर्सेका छौ। अहो, कति समझ नै नभएकाहरू! तिमीहरूले धेरै आशिषहरू गुमाएका छौ! अब तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्‍नुपर्छ र मेरा वचनहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, मसँग अझै बढी सङ्गति गर्नुपर्छ र अझै बढी मेरो नजिक आउनुपर्छ। तैँले नबुझ्‍ने सबै कुरामा, म तँलाई अगुवाइ गर्नेछु, र म तिमीहरूलाई अगाडि डोर्याउनेछु। अरूसँग अझै बढी सङ्गति गर्ने बारेमा ध्यानै नदेओ। अहिले अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरू प्रचार गर्ने धेरै छन्, तर मेरो वास्तविकतालाई साँचो रूपमा धारण गरेकाहरू निकै थोरै छन्। तिनीहरूका सङ्गतिले अन्योल र बोधो बनाउँछ, अघि कसरी बढ्ने थाहा हुँदैन। तिनीहरूलाई सुनेपछि, अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरूलाई अलिक बढी रूपमा मात्रै बुझ्‍न सकिन्छ। तिमीहरूले आफ्‍नो कदममा ध्यान दिनुपर्छ र तिमीहरूको हृदयलाई सँधै मेरो सामने बसाइ राख्‍नुपर्छ; तिमीहरूले मसँग कुराकानी गर्नैपर्छ र तिमीहरू मेरो नजिक आउनुपर्छ, अनि तिमीहरूले नबुझेको कुरामा तिमीहरूलाई देख्‍ने तुल्याउनेछु। सँधै आफ्‍नो बोली-वचनमा ध्यान देओ, आफ्‍नो हृदयलाई सँधै अवलोकन गर, र मैले हिँड्ने बाटो हिँड।
अब समय त्यति टाढा छैन; अझै थोरै समय बाँकी छ। म बाहेक सबै कुरालाई त्याग्न हतार गर अनि आऊ मलाई पछ्याओ! म तिमीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नेछैन! धेरै पटक तिमीहरूले मेरा कार्यहरूलाई गलत रूपमा बुझेका छौ, तैपनि म तिमीहरूलाई कति प्रेम गर्छु के तँलाई थाहा छ? अँ, तैँले मेरो हृदयलाई भुझ्दै-बुझ्दैनस्। तिमीहरूले जति शङ्का गरे पनि, तिमीहरू मप्रति जति नै ऋणी भए पनि, म त्यसलाई सम्‍झनेछैन, तैपनि अघि बढ्न र मेरो इच्‍छा अनुसार काम गर्न लगाउनको लागि म तिमीहरूलाई चुन्छु।
आज विलम्‍ब गर्ने समय होइन। अबदेखि उसो, तिमीहरूले केही गोप्‍य अभिप्राय राख्छौ भने, मेरो न्याय तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ। तिमीहरूले मलाई एक क्षणको लागि पनि छोड्यौ भने, तिमीहरू लोतकी पत्‍नीझैँ हुनेछौ। अब पवित्र आत्माको काम शीघ्र हुन्छ, र नयाँ ज्योतिलाई पछ्याउन नसक्‍नेहरू खतरामा पर्छन्। ध्यान नदिनेहरूलाई त्यागिनेछ; तिमीहरूले आफैलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। तँ जान्दछस् कि तेरो वरिपरि वातावरणमा भएका सबै कुराहरू मेरो अनुमतिमा त्यहाँ छन्, सबै मैले नै योजना बनाएको हुँ। स्पष्ट रूपमा हेर र मैले तँलाई दिएको वातावरणमा मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट बना। नडरा, सेनाहरूका सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर अवश्य नै तेरो साथमा हुनेछ; उहाँ तेरो पछाडि खडा हुनुहुन्छ र उहाँ तेरो ढाल हुनुहुन्छ। आज, मानिसहरूमा अत्यन्तै धेरै धारणाहरू छन्, जसले मलाई अभिमानीहरू र आत्म-धर्मी, घमण्‍डी, महत्त्वाकांक्षी, अनि आफूलाई उच्‍च ठान्‍नेहरूलाई शर्ममा पार्नका लागि, अरूले नीच ठानेका मानिसहरूद्वारा मेरो इच्‍छालाई व्यक्त गर्न बाध्य गर्छ। त्यसकारण जबसम्‍म तिमीहरूले मेरो बोझलाई इमानदारसाथ बुझ्छौ, म तिमीहरूका लागि सबै कुरा तयारी गर्नेछु। मलाई पछ्याऊ!
अघिल्लो: अध्याय २५